Maamulka Magalada Gaalkacyo oo u digey Xaaf - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Maamulka Magalada Gaalkacyo oo u digey Xaaf
Maamulka Magalada Gaalkacyo oo u digey Xaaf
Maamulka Magaalada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa kasoo horjeestay Warqad xalay kasoo baxday Madaweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf,taas oo lagu sheegay in xilkii looga qaaday duqa degmada,sidoo kalena lagu kala diray Golaha Deegaanka degmadaas.
Kulan ay maanta Magaalada Gaalkacyo ku yeesheen Mas’uuliyiinta Maamulka Magaalada iyo Xubno ka tirsan Golaha deegaanka ayaa waxaa ay baq ugu direen Madaxweyne Xaaf, iyaga oo sheegay in uu Magaalada ka wado qas iyo fowdo sida ay hadalka u dhigeen.
Guddoomiye xigeenka Degmada Gaalkcayo ee Galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Axmed iyo qaar ka mid ah Golaha degaanka oo kulanka ka hadlay ayaa waxaa ay sheegeen in ay si caadi ah u socoto howshii caadiga aheyd,isla markaana wax saameyn ah aysan ku yeelan warqadii kasoo baxday Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Ugu dambeyn Mas’uuliyiinta Maamulka Magaalada Gaalkacyo iyo Golaha deegaanka ayaa waxaa ay baaq u direen qeybaha kala duwan ee Bulshada,iyaga oo ka dalbadey inay amniga ka Shaqeeyaan.
Xaalada Magaalada Gaalkacyo ayaa Maanta ka duwan sidii hore,waxaana dadka degmada ay sheegayaan in Magaalada laga dareemay khilaafka soo kala dhex-galay Mas’uuliyiinta Maamulka iyo Madaxweyne Xaaf.
Previous articleSoomaaliland oo la wareegtay deegaan ay ku sugnaayeen Ciidamada Puntland
Next articleSoomaaliland oo toogasho ku fulisey Lix Ruux (Akhriso sababta)